Madaxweynihii Sheegay Inuu Helay Dawada Coronavirus Oo War Kale Soo Saaray | Somaliland Mirror
Home WARARKA Madaxweynihii Sheegay Inuu Helay Dawada Coronavirus Oo War Kale Soo Saaray
Madaxweynihii Sheegay Inuu Helay Dawada Coronavirus Oo War Kale Soo Saaray
Admin 4May 29, 2020WARARKA0
Madaxweynaha dalka Madagascar Andry Rajoelina ayaa u muuqda inuu ka noqday sheegashadiisii sida weyn loo shaaciyay ee ku saabsaneyd in dalkiisa uu daawo usoo saaray cudurka coronavirus. Arrintan ayaa soo baxday kaddib markii dalal kale oo ka tirsan Qaaradda Afrika ay dalbadeen in loo soo dhoofiyo dawo dhireedkaas la sheegay in looga caafimaadayo Covid-19, taasoo Hay’adda Caafimaadka Aduunka ee WHO ay horay uga soo horjeedsatay, iyadoo sheegtay inaan wax caddeyn ah loo heynin inay dawo u tahay cudurka.
Bishii lasoo dhaafay madaxweyne Andry Rajoelina wuxuu si rasmi ah u daah furay dawada dhirta ka sameysan, taasoo uu sheegay inay ka hortageyso islamarkaana daweyneyso fayraska corona. Shir jaraa’id oo uu ku shaaciyay helitaanka dawadaas ayuu u qabtay warfidiyeenka, wuxuuna isla goobtaas ku cabbay dawadaas.
Wuxuu madaxweyne Andry Rajoelina sheegay in dawo dhaqameedkiisa oo laga sameeyay shaah si bilaash ah lagu siin doono dadka nugul ee halista gaarka ah ugu jira inuu cudurka ku dhaco ama ay dhibaato weyn kala kulmaan. Wuxuu ku andacooday in natiijada dawadaas lagu dareemayo muddo 7 cisho ah gudahood.
Ka sokow digniinta ay hay’adda WHO kasoo saartay dawadaas, waaxda Qaran ee dawooyinka dalka Madagascar ayaa shaki weyn ka muujisay dawada uu shaaciyay madaxweynaha, waxayna mas’uuliyiinteeda sheegeen in halis caafimaad lagala kulmi karo maadaama aan waxtarkeeda lagu xaqiijinin baaritaan dhinaca seyniska ah. Talaadadii lasoo dhaafay, madaxweyne Rajoelina wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo saarayo cirbado ka sameysan dawadaas, wuxuuna sheegay in tijaabooyin caafimaad oo dawadaas la xiriira ay hadda ka socdaan dalka Mareykanka.
Hase yeeshee, hadda wuxuu madaxweynaha Madagascar u muuqdaa inuu si tartiib tartiib ah dib ugu guranayo. Michelle Sahondrarimalala, oo ah dhakhtarad ka tirsan laanta cilmibaarista dhinaca sharciga ee Madagascar ayaa hadal wax kala caddeynaya soo saartay, iyadoo ku hadleysa afka madaxweynaha.
Waxay sheegtay in wariyeyaashu aysan fahmin waxa uu madaxweynaha doonayay inuu shaaciyo. Waxay intaas ku dartay in waligiis uusan madaxweynuhu sheegin in dawadaas laga dhigayo cirbado, arrintaasina aysan guddiga seynisyahannada waddankaas wax tallaabo ah u qaadin. Horaantii bishan, wuxuu madaxweynaha Madagascar eedeyn dusha uga tuuray dadka shakiga ka muujinaya dawada uu xayeysiiyay. Wuxuu sheegay in Waddamada reer galbeedka oo kaliya lagu kalsoon yahay wax soo saarkooda balse qaaradda Afrika laga aaminsan yahay inaysan wax faa’iido ah keeni karin.
” Hadii cidda dawadan heshay ahaan lahayd dal reer Yurub ah, ma cid baa ka shikiyi lahayd? Ilama aha inay jiri lahayd cid kasoo horjeedsata” ayuu yidhi Rajoelina oo u waramayey telefishanka Faransiiska ee France 24. Dalalka Afrika ee uu coronavirus saameynta ku sheegay qaarkood, oo ay ka mid yihiin Nigeria, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea iyo Liberia ayaa dawadaas durba ka dalbaday Madagascar.
Midowga Afrika ayaa sidoo kale sheegay in ay sugayaan caddaymo saynis oo muujinaya “fayo qabka iyo wax tarka” dawadaas inta aanay wax go’aan ah ka soo saarin. WHO ayaa sheegtay in dadka Afrikaanka ahi xaq u leeyihiin inay helaan dawooyin la tijaabiyey oo la hubiyey, xataa hadii dawooyinkaasi yihiin kuwo dhaqameed oo dhir laga sameeyey.
Previous PostDaawo:- War Ka Farxiyay Somaliland Oo Ka Soo Yeedhay Imaaraadka Carabta Iyo Ujeedadiisa. Next PostXaaladda Minneapolis Oo Faraha Ka Baxday Iyo Ciidamo Lagu Daad-gureyay.